IINGCAMANGO EZI-29 ZETUSCAN ZASEKHISHINI EZIKHANGELEKAYO (EZIHONJISIWEYO KUNYE NOYILO) - UYILO LWEKHITSHI
iindawo Zokuphila Ngaphandle
Eyona uyilo Lwekhitshi Iingcamango ezi-29 zeTuscan zaseKhishini eziKhangelekayo (ezihonjisiweyo kunye noYilo)
Iingcamango ezi-29 zeTuscan zaseKhishini eziKhangelekayo (ezihonjisiweyo kunye noYilo)
Le galari ibonisa iingcinga zekhitshi zaseTuscan ezintle kubandakanya iindlela ezahlukeneyo zekhabinethi, i-flooring, iziqithi kunye nokuhonjiswa. Ikhitshi lesitayile laseTuscan liza neetoni ezishushu ezityebileyo, uyilo lwase-Italiya kunye nekhabhathi ye-rustic kunye ukwenza indawo entle yokupheka kunye nokutya. Amakhaya amaninzi ezigidi zeedola axhotyiswe ngamakhitshi anqabileyo aseTuscan ukwandisa ixabiso kunye nomtsalane wamakhaya abo.
Ikhitshi elihle laseTuscan eliboniswe kumfanekiso ongentla libanzi kwaye linobunewunewu. Yinkcazo yecoffer eneenkcukacha esele ibeka i-classic / imveli yendabuko yale khitshi njengoko igcoba ngokubumba kunye neenkcukacha eziqhelekileyo zangaphakathi zeklasi. I-Rustic mahogany imigangatho kunye neendonga ezimhlophe ezingacacanga zibeka imvelaphi efudumeleyo kwindawo, ivumela imozulu wengue egqityiweyo yeekhabhathi zekhitshi ukuba zivele. Kolu luyilo, uya kubona ukuba indawo yokugcina inikwa kuqala, ngakumbi kwiikhabhathi zekhitshi eludongeni nakwiikhawuntari.
Indawo enkulu inikezelwe kugcino lwekhabhathi kunye nemiboniso, ngelixa indawo yokubala ihlala ikakhulu kwisiqithi esikhulu sekhitshi. Ukugqitywa kwe-matte wengue kuye kwakhangeleka kungaginyisi mathe, kwaye kuneempawu zakudala zase-Itali ezinje ngezixhobo zokujikajika, ii-corbels zokuhombisa ezinemifanekiso eqingqiweyo yegqabi le-acanthus kunye neepaneli zomthi ezinepeyinti eneentyatyambo. Eli khitshi likwanayo nekhawuntari yesiqithi esekhitshini eyahlukileyo ephezulu kuneyona ndawo iphakamileyo, kwaye isebenzisa itafile eyenziwe ngesakhelo esiqinileyo saseMahogany kunye neetiles zeceramic embindini wayo. Ikhabhathi ye-bae imhlophe endaweni ye-wengue, iyenza ibonakale ngathi sisiqwenga esahlukileyo kwikhitshi liphela.
Kubantu abonwabela isibheno esityebileyo seekhitshi zase-Italiya, kodwa bakhethe ukhululeke ngakumbi, ukuziva nje, iikhitshi zaseTuscany lukhetho olukhulu. Njengoko iskimu sayo sombala sithembele kufudumalo, iithoni zomhlaba, sinendawo eyamkelekileyo yokwamkela, kwaye ukugqitywa okusetyenzisiweyo kwiikhitshi zaseTuscan nako kunika imvakalelo yokuhlala ngakumbi njengoko kujongeka njengokukhitshi elisetyenzisiweyo kunelo gumbi lokubonisa / lokubonisa ikhitshi . Isitayela sekhitshi sigqibelele abo bathanda iinkcukacha kunye nesibheno seklasiki seekhitshi zaseNtaliyane, kodwa bakhetha i-villa yelizwe elingaphantsi.
Ukuze ufezekise olu hlobo lwasekhitshini, umntu kufuneka aqaphele ezi zinto zibalulekileyo zilandelayo kwiikhitshi zaseTuscan.
Imibala - Iikhikhini zaseTuscan zihlala zisebenzisa imibala efudumeleyo ekhumbuza imibala efumaneka ngokwendalo eTuscany, enje ngeorenji, ocher okanye iterracotta.
Ikhabhinethi - i-matte, i-rustic finishes idla ngokukhethwa kwiikhikhini zaseTuscan ukunika ukubonakala okugugileyo / okusetyenzisiweyo, kwaye kunokuthi kupeyintwe okanye kugcinwe kumbala wendalo. Uyakuqaphela ukusetyenziswa kwemiboniso evulekileyo okanye iikhabhathi zeminyango yeglasi ekuvumela ukuba ubonise iiseramikhi zase-Italiya kunye nezinye izinto ezixabisekileyo. Kukho umkhwa wokungalingani kwekhabhinethi kwiikhikhini zesitayile saseTuscan, ezibenza babonakale njengeziqwenga zefanitshala ezishenxiswayo.
Ilitye- lokubala imiphezulu yeetafile, amatye endalo asenokukhethwa kwizinto ezibengezelayo, kodwa i-backsplash ngamanye amaxesha ibinokuba neethayile ezimenyezelayo okanye amatye okwahluka kancinci.
Umgangatho - izinto ezisemgangathweni ezisetyenziswa kwiikhikhini zaseTuscan zikwasebenzisa ngokwendalo umbala oshushu wombala. Ezinye zezinto eziqhelekileyo ezisetyenzisiweyo ziithayile zeterracotta, imarble, iithayile zekheram, iithayile zombala, iithayile ezipeyintwe ngesandla, kunye nelinye ixesha, ukhuni oluqinileyo luyasetyenziswa ngokunjalo.
Imifuziselo - imidiliya, iidiliya, iminquma, iilamuni, umchamo ngeentyatyambo zezinye zezinto eziqhelekileyo oza kuzifumana kwiikhitshi zaseTuscan, ezisetyenziswa njengemifanekiso eqingqiweyo yekhabhathi, ebhalwe kwiminyango yekhabhinethi okanye kwiitafile zetafile, ezipeyintwe ngesandla kwiithayile zeceramic okanye kwi-inlaid on ilitye / iithayile.
Iikhitshi zaseTuscan zikwaninzi ekukhanyeni kwendalo, kwaye ihlala iyindawo yokuqokelela kunye neziko lemisebenzi yosapho, kwaye ke inemvakalelo yokuvuleleka kuyo, ivumela incoko kunye nokutya ekhitshini. Uya kuqaphela ukuba iikhitshi zaseTuscan zinendawo ebekelwe ukubhaka, enokuthi okanye ingabonakali ingahluka kwikhitshi liphela.
Njengaso nasiphi na isitayile yoyilo, umntu makakhumbule ukugcina izinto zilungelelanise ukudala uyilo lwekhitshi elungileyo. Kwiikhitshi zaseTuscan, iikhabhathi zomthi ezimnyama / zendalo zihlala zibhangqiwe ngokugqitywa kodonga, ngelixa iikhabhathi ezipeyintwe ezimhlophe zihlala zidityaniswa nemibala eshushu yodonga ngokuchaseneyo. Ukufikelela kwakhona kubaluleke kakhulu kwiikhikhini zaseTuscan njengoko uhlala uhlala kwiiglasi kunye ne-pickles okanye igcina, okanye iiceramics zokuhlobisa.
Apha ngezantsi kukho imifanekiso emihle yeengcinga zekhitshi laseTuscan onokuzisebenzisa ukuzisa le ndlela intle ekhaya lakho:
Eli khitshi ngumzekelo olungileyo wokuziqhelanisa nekhitshi yesitayile saseTuscan. Iqhayisa ngeenkcukacha ezifana nomgangatho omnyama womthi wom-oki kunye nokulinganisa iinkuni zom-oki eziveziweyo ukuze zinike i-antique, ngelixa iikhabhathi zasekhitshini zenziwe nge-walnut eqinileyo ngesandi esiphantsi esibomvu. Le nguqulo yanamhlanje isebenzisa i-countertop emhlophe emhlophe emhlophe endaweni yokugqitywa kwamatte okuqhelekileyo kwindlela yokwakha yaseTuscan, kodwa ukusetyenziswa kweekhandlela zensimbi kunye neetayili zepeyinti ezenziwe ngesandla kwi-backsplash yazo zenza ukugqitywa kwezinto zokubala.
ungalitshintsha ngokusemthethweni igama lakho lokugqibela
Olu lolunye uhlengahlengiso lwala maxesha lwesitayile seTuscan esine-rustic maple flooring, i-mahogany plains trusses, iindonga ezenziwe ngepeyinti kunye nekhabhathi eqinileyo ye-walnut. Isebenzisa ilitye lenyengane matte kwi-countertop yayo kunye nee-mosaic tiles ze-backsplash, ukongeza iziqwenga ezimbalwa ezipeyintiweyo ngesandla kumda woluhlu lwe-hood. Inkangeleko igqityiwe ngokongeza isitulo sebar yentsimbi kunye nekhandlela, kunye nezitya zeglasi ezineziqhamo ezigciniweyo njengezincedisi.
Ukufakela iinkcukacha zeshishini kunye neenkcukacha zasekhitshini zakudala zaseTuscan kukhokelela kwinkangeleko enomdla kakhulu. Isiseko sendawo sigqibelele ngaphakathi kwangaphakathi okuphefumlelweyo kweTuscan, kuba sisebenzisa i-matte flooring yamatye kunye nolwakhiwo lwelitye lokwenene eludongeni. Amatye endalo anemibala ekhanyayo anika imvelaphi egqwesileyo yeekhabhathi zewine zeekona zokubala zasekhitshini, kunye nesiseko seMahogany sesiqithi sasekhitshini. Yongeza neenkcukacha ezinomdla ezinje ngeentaba zezikhonkwane ezisecaleni kwetheyitile yesiqithi sekhitshi ukutshatisa ishedyuli yentsimbi eyenziwe ngesando.
Le kona encinci yale khitshi sele ineenkcukacha ezininzi ezifumaneka kwiikhikhini zaseTuscan. Itafile yematte yegranite ibhangqiwe ngeekhabhathi zerustic, imigangatho yamatye yendalo enombala oshushu weorenji, iikhabhathi ezingaphezulu ezineengcango zeglasi ukubonisa izinto zekheram kunye nezinye izinto ngaphakathi, ii-motifs zakudala zase-Italiya, ii-corbels kunye neebhotile zeglasi kunye nezimbiza ezineziqhamo ezigcina izixhobo.
Iindawo ezilungileyo zekhefu lomtshato emhlabeni
Kulabo bakhetha iikhitshi ezinomtsalane oqaqambe ngakumbi kunye nokungaqhelekanga, emva koko oku kwahluka kwesitayile saseTuscan lukhetho olukhulu. Usebenzisa ukukhanya okugqityiweyo okufana neendonga ezimhlophe kunye neetayile zegranite zendalo, isithuba siyakwazi ukwenza umva okhanyayo wokugqitywa komthi weziqhamo wekhabhathi zasekhitshini. Isithuba sinefestile enkulu, enceda ukubonelela ngokukhanya kwendalo kwisithuba, sikhanyise ikhitshi lonke ngokwaneleyo emini kwaye kugqitywe iinkcukacha ezinje ngesilingi enezitena kunye neetrasi zomthi kunye nokugqitywa kweerhasi kweekhabhathi. Embindini wekhitshi kukho ikhawuntari enkulu yesiqithi enekhabhathi yesiseko yepeyinti, indawo ekuthiwa yiMahogany kunye nendawo yokubeka isitya yentsimbi exhonywe kanye ngentla kwayo. Ithoni epholileyo yemizuzu yesiqithi sasekhitshini inika imvakalelo ehlaziyayo kwisithuba, kwaye iyahambelana nedesika enjenge desika kunye nesihlalo esiluhlaza esibonisa ileya ecaleni kwekhitshi.
Ngelixa uninzi lweekhitshi zaseTuscan ziziva ziziva zingaqhelekanga, olu luyilo lukhangeleka ngathi lisesikweni ngakumbi kwaye luyoyikisa ngenxa yobume balo obumnyama kwaye ligqibe. Ikhitshi lisebenzisa ukugqitywa kom-oki omnyama kuzo zonke iikhabhathi zasekhitshini kunye neekhawuntari, kunye negranite etyheli kwitafile. Umthi omnyama odityaniswe nomphezulu ocwebezelayo wenza umbono wobunewunewu nobuhle kwisithuba, ukwahlukana nokuziva okuqhelekileyo kweekhitshi zesiko laseTuscan. Ngaphandle kokwahluka, nangona kunjalo, uya kuhlala ubona izinto ezibalulekileyo kwiikhitshi zaseTuscan ezinje ngokubaluleka okubekwe kwindawo yokugcina izinto, iikhabhathi zecango zeglasi ezibonisa iiseramikhi ezixabisekileyo, kunye neethayile zemibala ebonisa iintyatyambo kunye nezinye izinto zeTuscan.
Iithayile zomgangatho wegranite kunye nokukhanya okufudumeleyo okutyheli okutyheli sele kunika eli khitshi indawo entle ye-rustic. Iikhabhathi zasekhitshini zigcina ukukhanya kwesikimu sombala ofudumeleyo wendalo ngokusebenzisa iinkuni zeNdalo yeHickory kuzo zonke iikhabhathi zayo, ngaphandle kwesitampu sefriji esipeyintwe kumabala amnyama wengue. Itafile yelitye yendalo esetyenziswe kwiikhawuntari eziphambili ine-matte egqibeleleyo entle ngokuchasene nelitye elicwebezelayo elisetyenziswe kwisiqithi sekhitshi. I-backsplash yekhitshi isebenzisa iithayile zekheram ezigqityiweyo kunye neetayile ezivakalisiweyo ezazipeyintwe ngesandla ukwenza iipateni zefleur, kwaye yenziwe ngesinyithi esikroliweyo.
Le khitshi intle inoyilo olulula oluvulekileyo, luyenza indawo entle yokonwabisa iindwendwe kunye nosapho ngokutya. Indawo evulekileyo isebenzisa iithayile zegranite zendalo ezinombala otyheli kwaye isebenzisa ubukhulu obahlukeneyo ukwenza iphethini yejometri engahleliwe kumgangatho womgangatho, iindonga zicinyiwe zimhlophe, kwaye isilingi iyaqhayisa ngemiqadi yeplanga yeeteksi kunye neeplanga. Ikhitshi ngokwalo lijikelezwe ziifestile, libonelela ngokukhanya okwaneleyo kwisithuba, sinceda ukukhanyisa iikhabhathi ezintle zeSequoia zetsheri ngemidiliya eqingqiweyo yesidiliya. Ikhitshi nayo inesiqithi esikhulu sekhitshi esisetyenziswa ikakhulu njengendawo eyongezelelweyo yokulungiselela kunye nendawo yokutya eqhelekileyo, ivumela indawo ye-4 izitulo zebar cherry.
Umgangatho weplanga omnyama we-cherry, ukukhanya kweendonga ze-beige kunye neepherishi zomthi we-cherry kulwakhiwo lwe-chevron eluphahleni kudala umva ogqibeleleyo wolwakhiwo lwekhitshi laseTuscan. Isebenzisa izibane ezimhlophe ezifudumeleyo ukwenza ubushushu obufudumeleyo kunye nothando, kunye nokudityaniswa kweenkuni ezahlukeneyo ezigqityiweyo zokuziva ubuyile. Iikhabhathi eziphambili zekhitshi zisebenzisa i-rustic walnut yokugqiba, kwaye zinikezela ikona yekhitshi kwinqaba ye-oveni, ngelixa isiqithi esikhulu se-L esimile sasekhitshini sisebenzisa ubuchule bokupeyinta obugugileyo kwikhabhathi yaso, kusetyenziswa umbala okhethekileyo we-teal pop yombala. Uyakubona kwakhona izitulo zebariti zakudala ezinefreyimu yomthi weziqhamo, iithayile zokubuyisa umva ze-matte, kunye nezixhobo eziqhelekileyo zekhitshi laseTuscan ezinje ngeepleyiti, iibhasikiti zeziqhamo kunye neevasi zezityalo.
Ukudibanisa ngobuchule kwezinye iinkcukacha zaseMoroccan kuyilo, le khitshi ye-eclectic yaseTuscan idibanisa izinto zaseMoroccan naseTuscan zoyilo zokwenza ukukhanya okwangoku kodwa okungaqhelekanga. Ezona nkcukacha zibalulekileyo zaseMoroccan iya kuba sisilingi ekhitshini ebipeyintwe ngemibala yaseMoroccan kunye nemibala efana nohlaza kunye neorenji, ekwanxulunyaniswa noyilo lweTuscan. Isilingi ngokwayo sele idale ingxelo kwisithuba, kwaye iyanceda ukugxininisa indawo yekhitshi. Umgangatho usebenzisa iinkuni ezibengezelayo, ngelixa iindonga zi-oatmeal elula kunye nokugqitywa kwe-stucco. Iikhabhathi zasekhitshini zonke zisebenzisa iti yeAntique, edityaniswe nekhawuntara yekhalite etyheli. Icandelo eliphambili lekhitshi linikezelwe ekuphekeni, ngelixa udonga lwasekunene ikakhulu lubhaka kunye nokugcina ezinye izinto zokutya.
Eli khitshi linenkangeleko enomdla kakhulu, njengoko yonke imigangatho kunye neendonga zazinxitywe kwiithayile zemabhile zematte, zenza ipateni yendalo kumphezulu, kwaye oko kwenza ukuba kube nzima ukuyila ngenxa yeepateni zendalo zelitye. Uyilo, nangona kunjalo, lwalusebenzisa uloyiko lwekhabhathi yekhabhathi eqinileyo, kunye neekorbels ezibaxekileyo kunye nezinye izinto ezibaziweyo. Ngenxa yokuba iindonga kunye nemigangatho sele zikhangeleka zixakekile, ikhitshi liyahlawula ngokusebenzisa umthi ofanayo ukugqiba konke ekhitshini, kwaye kusetyenziswa amanani afanayo e-beige granite kuwo onke ngokunjalo.
izipho zekrisimesi zothando kuye
Ukusuka kule engile yekhitshi ufumana umbono osondeleyo weetheyibhile zemarble ezinqabileyo kunye nekhabhathi yesiqhelo yesiqithi somthi. Ukubumba kweenkuni ngokwezifiso kunye nokugqitywa kubonakala kuyo yonke indawo ukuyinika uyilo oluthandekayo. Isitayile sase-Italiya sikwabonakala kwiifestile ze-arched, i-marble flooring kunye ne-backsplash.
Leli khitshi laseTuscan libukeka likhulu kwaye libanzi ngokubonga kwindawo ephezulu. Indawo inesicwangciso somgangatho ovulekileyo, esenza ukuba indawo yokutyela ifikeleleke ngokuthe ngqo ekhitshini, iyenze ibe yindawo efanelekileyo yokonwabisa. Umgangatho wokhuni lweCherry wawudityaniswe ngepeyinti emhlophe ehlanjiweyo emhlophe yeendonga kunye neethayile zezitena zodonga eluphahleni kunye nokuvulwa kwe-arch, ukugqibezela ukujonga kwe-rustic yephondo. Iikhabhathi zasekhitshini zisebenzisa iikhabhathi zendalo zeHickory ezinezinto zokubala ezimnyama nezibomvu, kunye nesiqithi sasekhitshini esasipeyintwe ngombala omnyama kwaye sineenkcukacha zokubumba zangasemva, esibonisa iithayile zedayimani enemodeli yedayimani esetyenzisiweyo kwi-backsplash yekhitshi.
Iifestile zeArch, imiqadi yeplanga kunye neethayile zomgangatho weterracotta sele iseti indawo eyiyo yephondo, kwaye iyagqitywa ngeekhabhathi zekhitshi ezenziwe ngamaplanga ezenziwe nge-oki yendalo eqinileyo. I-backsplash yayifakwe iithayile zekheramic ezijolise kwi-diagonally, ngelixa isiqithi sasekhitshini sisebenzisa islabha esomeleleyo sokhuni oluqinileyo lwetsheri kunye nezibiyeli zekona zentsimbi kwindawo yalo. Kukho ikhabhathi enkulu enikezelwe ukubonisa izinto ekhitshini, kodwa zonke iikhabhathi ezingaphezulu zisasebenzisa iikhabhathi zeminyango yeglasi.
Iikhitshi zesitayile zase-Italiya zihlala zinobuhle, kwihlabathi-lakudala / ukuziva kweediliya, ngelixa iikhitshi zaseTuscan zihlala zililizwe elithe kratya okanye nokuba ne-shabby chic kwivakalelo zayo zonke. Eli khitshi likhulu ngumzekelo olungileyo, njengoko udibanisa iintlobo ezahlukeneyo zokugqitywa kwendalo, kunye neendlela zokugqiba zerustic ukufezekisa oku kujongeka. Ngokuqinisekileyo ikhitshi elisebenzayo, olu luyilo luneendlela zokuhamba eziphangaleleyo kwindawo ejikeleze ikhitshi, evumela abasebenzisi abaninzi ukuba bahambe ngokukhululekileyo kwaye basebenze ngokufanelekileyo. Iziqithi ezinkulu zekhitshi zibonelela ngendawo yokusebenza efunekayo, ukuvumela udonga olunye ukuba lunikezelwe ngabapheki bezinto kunye nee-oveni. Isithuba silawulwa kukurhabaxa, i-rustic finishes, enjengamatye e-ocher phantsi, udonga lwamatye kunye nodonga lwezitena. Kuba uninzi lweendawo ngokubanzi sele zifudumele-ziitoni, iikhabhathi zipeyintwe kwisiphelo esipholileyo esilumkileyo esiluhlaza, ukuyinika eso sibheno sisetyenzisiweyo kwaye safakwa ilitye lekalika lendalo ukugqibezela ukujonga.
Ukuya kukhangeleka kuthambile, kwaye kungathathi hlangothi, eli khitshi laseTuscan lihamba silhouettes ezilula zekhabhathi kwaye lisebenzisa i-hickory yendalo kwisiphelo se-matte ukuseta indawo efudumeleyo efudumeleyo kwindawo egcwalisa i-walnut eqinileyo. Iindonga zipeyintwe nje ngepeyinti emhlophe engekho mhlophe, ngelixa ucango kunye neefestile zeefestile zisebenzisa neenkuni zendalo zeHickory ukutshatisa iingqayi zomthi eziveziweyo eluphahleni. Ukongeza ezinye iindidi ngokwahlukileyo, uyilo olulula, iithayile zeceramic kwipateni yebhodi yokujonga edibeneyo isetyenzisiwe eludongeni lwe-backsplash, kodwa isebenzisa ukhilimu kunye ne-mocha brown endaweni yomnyama nomhlophe ukugcina ukubukeka kwe-rustic.
Izimvo zekhitshi laseTuscan ezinemivalo yesidlo sakusasa ziyamema kunye nendlela eluncedo yokudibanisa iintsapho. Le khitshi ibonelela ngekhabhathi emnyama yomthi eqinileyo ngomsebenzi ontsonkothileyo wescroll kunye nesiqithi esikhulu senkcubeko. Ilitye elinqunyiweyo elirhabaxa elijikeleze isitovu esikhulu segesi. Ukuthinta okunje ngesitayile esenziwe ngentsimbi, izitulo zebar ezimnyama kunye neekhabhathi zecango zeglasi zinika eli khitshi uyilo lwehlabathi elidala elihle kwaye ligcwele ubuntu.
Uyilo lwekhitshi yaseTuscan ethambileyo inombala okhanyayo nothambileyo oza kufana noyilo lwala maxesha kunye nexesha. Ukuqala ngemvelaphi, isithuba sisebenzisa ukugqitywa kwepeyinti emhlophe emhlophe ngombala odityanisiweyo, ukunika ukujongwa kwangaphakathi kweMeditera, kunye nokuqhubela phambili kufikelela kwisiphelo esiphakamileyo, esithi ke sidibanise imiqadi yeenkuni zokuhombisa ubukhulu ngakumbi. Umgangatho wommandla ngokuqinisekileyo ubeka ukubonakala kweediliya okwenyani kwekhitshi, njengoko isebenzisa iithayile zeterracotta ezimile okweenkwenkwezi, zenza ipateni entle nenomgangatho kumphezulu wayo. Kwiikhabhathi zasekhitshini, uyakubona ukuba indawo enkulu ivumela ukudala iindawo ezahlukileyo kubeko, ukwahlula indawo yokugcina, ukupheka, ukubhaka, njl njl, ukusuka komnye komnye, ngokusebenzisa iindonga zodonga apho iikhabhathi zasekhitshini zilingana ngokugqibeleleyo. Iikhabhathi ezihonjisiweyo zazipeyintwe ngombala ohlaza okwesibhakabhaka ngentsimbi egqityiweyo, ngelixa isiqithi esikhulu sekhitshi sigcina umbala wendalo we-oki, siphucula ukuziva kwesithuba.
Abanye abantu bakhetha ukugqitywa ngakumbi xa kufikwa kwikhabhathi yabo, kwaye ukuba ufuna ukufezekisa ikhitshi laseTuscan eliqhelekileyo, lo ngumzekelo omhle wokuthatha amanqaku. Iikhabhathi zasekhitshini zaseMahogany zanikwa ukukhanya kusetyenziswa isikhonkwane sangaphezulu, ngelixa iitafile zisebenzisa ilitye lenyengane elityheli. Ibhalansi yokugqitywa kokugqitywa kwekhabhathi, udonga lwemigangatho kunye nophahla banikwe ukugqitywa okubhaliweyo. Umgangatho welitye lekalika yendalo ngombala okhanyayo otyheli, ngelixa iindonga zigqitywe yi-stucco ngombala otyheli wegolide, zenza indawo efudumeleyo kunye nothando kwindawo.
Inobuhle kodwa iyadlala, eli khitshi linobunewunewu laseTuscan linekhabhathi yeklasi yase-Italiyane, edityaniswe nezinye izinto eziphezulu kunye nokugqitywa. Udonga olupheleleyo lwalunikezelwe ukugcina, kusetyenziswa iikhabhathi zeenkuni ezenziwe ngeplastikhi eneekhabhathi ezincinci zeglasi kwisahlulo salo esingaphezulu kunye nezibane zekhabhinethi ukubonisa izinto ezixabisekileyo. Kukho iziqithi ezi-2 zasekhitshini kwindawo-enye esembindini inesiseko esimnyama se-wengue kunye nekhawuntara ebomvu egreyithi ebomvu, ngelixa enye ingaphezulu kwesiqithi sekhitshi sebhari esisebenzisa ukukhanya komthi we-chestnut ngeenkcukacha ze-neoclassic. Ngokungafaniyo neekhitshi ezininzi zaseTuscan, awuyi kuyibona indawo yokubhaka kule ndawo, kodwa kwelinye icala, uya kubona ikhabhathi enkulu yokubonisa esecaleni eneshelufu evulekileyo yokuhambisa izinto ezahlukeneyo, nto leyo ebaluleke kakhulu ekhitshini laseTuscan . Iindonga zanikwa i-stucco emhlophe emhlophe yokongeza ukuziva kwendawo, ngelixa isibhakabhaka kunye nefestile enkulu inceda ukukhanyisa indawo.
Ukulungelelanisa ligama eliphambili kule nombolo intle yasekhitshini laseTuscan, njengoko isebenzisa iskimu sombala ofanayo kunye nokugqitywa kweenkuni kuzo zonke iindawo ezingaphakathi. Uya kuqaphela ukuba zonke izinto zomthi zisebenzisa umbala ofanayo weHickory kunye nokugqiba, ukwenza ukujonga okulungelelaniswe kakhulu. Umthi we-hickory uya kubona emacaleni nakwifestile yeefestile, kwiibhodi ezisezantsi, kwii-cornices nakwezinye izinto ezibunjiweyo kunye neziqwenga zefanitshala. Oku kuseta nendawo ephantsi etyheli efudumeleyo ngaphakathi, ngakumbi njengoko ikhitshi lisebenzisa ukutyibilika kwelitye lendalo elinendawo ephantsi etyheli-orenji. Eli khitshi linesiqithi esahlukileyo esine-octagonal ekhitshini embindini, ebonisa imilo yoyilo olungasasebenziyo.
Ukugqitywa kwepeyinti ekhanyayo / emthubi ophekiweyo kwiikhabhathi zasekhitshini kunika eli khitshi imbonakalo yeediliya / yeminyaka edala ubuntu obuninzi kunye nokuthandeka, ukuthamba okuthambileyo. Le khitshi yabekwa embindini wendlu, ivumela ukuhlangana kwabantu, iyenza indawo elungileyo yeendibano zosapho. Iikhabhathi ezinemibala e-cream zigqibezela ngokulula ubumnyama obuphantsi bomgangatho obomvu we-Cherry flooring, ngelixa i-wengue ikhitshi lesiqithi lizama ukuzidibanisa nezinye iifenitshala zase-Italiya ngaphakathi, ezinje ngesitulo sokubuyisa isitebhisi kwindawo yokutyela eqhelekileyo.
Olu luyilo luthandekayo luza ngokuxuba izinto zekhitshi laseTuscan kunye nolunye uyilo lwesitayile sexesha, kunye neesesthetics zangoku. Ukukhanya okuthe tyaba kwendalo yemigangatho yegranite kunye ne-stucco kugqitywe iindonga kuseta isiseko esifanelekileyo sesitayile seTuscan ekhitshini, ngelixa ukudityaniswa kokukhanya okuqaqambileyo kwendalo kunika izinto zangaphakathi ukukhanya, ukucoceka ukuziva kuhlala kunxulunyaniswa noyilo lwangoku. Ifanitshala egqityiweyo ekhitshini yahlukile, ibenza babonakale ngathi ziifenitshala ezinokususwa endaweni yeekhabhathi zasekhitshini. Uyakubona ukusetyenziswa kweenkuni ze-teak, i-cherry, kunye nepeyinti emhlophe ye-matte, edityaniswe ne-cream kunye ne-granite ebomvu e-polished. Indawo yokupheka inendawo yokupheka eyakhelwe-ngaphakathi yokupheka ephezulu / yeebhu, kwaye inyanzeliswa ziithayile zodongwe zodongwe ezibekwe eludongeni olukufuphi, ezenza iphatheni entle ye-chevron. Uyakuqaphela ukusetyenziswa kwesitulo se-Queen Anne esitena, kunye nekhitshi laseTuscan - isitovu sezitena kanye kwikona yesithuba.
iingoma zokucula kumsitho womtshato
Abantu bathambekele ekubeni neentloni ekugqityweni okumnyama kunye nokudityaniswa kombala xa kufikwa kuyilo lweekhitshi zaseTuscan njengoko iipelethi ezimnyama zivusa ukuziva okupholileyo / okusoyikisayo. Olu luyilo, nangona kunjalo, lubonisa indlela onokusebenzisa ngayo ukugqitywa komthi omnyama, kodwa ke ufezekise ukungaqheleki kunye nokwamkela ukuziva ukuba abantu bayathanda malunga neekhitshi zaseTuscan. Uyilo luqala ngesiseko esifudumeleyo, esenziwe ngombala wendalo yelitye lekalika, kunye nopende olukhanyayo otyheli wodonga lwe-stucco yokuziva kweMeditera. Indawo ikhanyiswa ngokwaneleyo zizibane zendalo kunye nezokuzenzela, ke oko kwenza kube lula ukusebenzisa umthi omnyama waseMelika kuzo zonke iikhabhathi. Ilitye lentlabathi elityheli lalisetyenziselwa i-countertop, kwaye imiphetho yayo enqamlezileyo yayigcinwa ukuze ibenokubukeka okungaphezulu kwendalo nangona yayiqaqanjisiwe. Ukugqibezela inkangeleko yonke kuya kuba yimigangatho yeplanga yentsimbi eyomeleleyo yaseMelika eluphahleni, kunye neerali zembiza emnyama yentsimbi kunye nezibane ezijingayo ezisetyenziswa njengezincedisi.
Indawo yekhitshi icekeceke kancinci kuneminye imizekelo, kodwa ubuninzi beewindows benza ukuba indawo ibonakale inkulu. Iikhabhathi zasekhitshini zonke zinento efanayo kwaye zigqityiwe, zisebenzisa i-sequoia cherry kwisiphelo se-satin, enezinto zokubala ze-granite ezimdaka namhlophe ezimhlophe ezine-nosed beosed. Ikhabhinethi yeenkuni ze-cherry yinto efanayo esetyenzisiweyo kwiminyango kunye neefestile zesithuba, ke kujongeka kulungelelaniswe kakuhle. Izinto zokwakha zenziwe ngelitye lekalika ngokwendalo lokufakelwa okwandisiweyo kunye nokubonakaliswa okushushu okufihlakeleyo, ngelixa iindonga zipeyintwe ngokudityaniswa kokumthubi kunye nokumhlophe okutyatyekiweyo.
Uhlobo olwahlukeneyo lokugqitywa kunye nokugqitywa kwakudityanisiwe kule khitshi ye-eclectic yaseTuscan, ebonisa ubuhle kunye nobugcisa bokuyila i-Italiya, kwaye kwangaxeshanye, kubonisa isimo sengqondo esifudumeleyo nesingaqhelekanga seTuscany. Umgangatho wokhuni we-oki owenziwe nge-rustic wanika ikhitshi isiseko esihle, ngelixa ipeyinti yodonga lwe-stucco yokukhanya iphela iya kuthi yongeze ukuthungwa okungaphezulu. Iikhabhathi zasekhitshini zisebenzisa indibaniselwano yeMahogany kwisiphelo se-satin kunye nesiseko esimhlophe-sipeyintwe, esenza ibhalansi enkulu, kwaye zombini zikhangeleka zintle ngetafile yemabhile yegolide kunye negolide. Ukuba ujonga ngokusondeleyo, uyakuqaphela ukusetyenziswa kweethayile zesileyiti, kunye neethayile eziluhlaza okwesibhakabhaka kwiikholamu nakwindonga yokubuyela umva, ukongeza umbala kunye nokuthambeka kwiindawo zayo. Indawo yokupheka inikwa ugxininiso ngakumbi ngokusebenzisa iithayile ezimhlophe zemabhile ezazipeyintwe ngesandla ukubonisa umzekeliso wesixeko esidala.
Eli khitshi lahlukileyo laseTuscan ngokuqinisekileyo liyinkwenkwezi yendlu, njengoko ibekwe embindini wendawo evulekileyo kwaye yanikwa indawo eninzi, ivumela ukufikelela kubo bonke abaphilayo nakwiindawo zokutyela. Indawo yekhitshi igxininiswa yisilingi encinci, eyenziwe ngezitena zakudala, ikwenza ukuba ugxile embindini wesithuba. Ikhitshi linesicwangciso somgangatho esikhethekileyo, esivumela ukusetyenziswa kwendalo kunye neemilo ukufezekisa ubume obulungileyo.
I-Satin igqibe iikhabhathi zomthi we-teak zibetha iindonga, ngelixa isiqithi esincinci esimnyama sasekhitshini sibekwe embindini, kanye ezantsi kwesilingi evaliweyo ukuyinika ugxininiso ngakumbi. Ikhawuntari yebha ngumfanekiso wesipili wekhabhathi eziphambili zekhitshi, ezinika imilo efana netrapezoid. Ukusuka kwayo yayinxitywe ngamatye okwakhiwa kwendalo, kwaye ifakwe ityuwa kunye nepepile lenyengane. Izimvo ezininzi zekhitshi laseTuscan zivela kwiitoni ezishushu zomhlaba kunye nezinto zendalo ukwenza isibheno se-rustic esimema.
Esi sisicelo esihle sanamhlanje soyilo lwekhitshi laseTuscan. Iingcango ezenziwe ngomthi kunye neefestile zomdlalo kunye nezinto ezenziwe ngemithi yokuhombisa eluphahleni, ngelixa imigangatho nayo igcina ukurhabaxa, ukubonakala kwe-matte, ngokusebenzisa iithayile zerhasi zerhasi. Ikhitshi lincinci, kodwa lisebenza ngokubalulekileyo izinto zasekhitshini zase-Itali ezifana ukugqitywa kwe-matte ngokudityaniswa okumhlophe kunye nesage eluhlaza, kunye nodonga oluyingqayizivele olubuyela umva, oluthi kule meko, lisebenzise iithayile zerusti zodongwe ngokudibanisa imifuno, abamhlophe kunye nabamdaka. Itafile endala yokugcina izinto yayisetyenziselwa itafile yokutyela, ngelixa izitulo zokutyela zisebenzisa izembozo zelinen emhlophe, ukugqibezela ukubukeka kwekhitshi laseTuscan.
Uyilo lweKhitshi eGalleries onokuyithanda:
Uyilo lweKhitshi yelizwe - Ingcibi yekhitshi - Uyilo lweKhitshi yaseRustic - Iikhitshi ezineeKhabhathi eziMnyama - Iikhitshi zaseMeditera
Iiwayini ezikufutshane nam kwimitshato
yakhe kunye neyakhe camo yomtshato webhendi yomtshato
las vegas ukuya sedona az
unxiba ntoni kwisidlo sangokuhlwa sokuziqhelanisa
amagumbi okulala mihla
USophie Turner joe jonas umtshato